Jarmalka - ALinks
Maqaallada ku saabsan Jarmalka
Kiniinka ugu fiican dugsiga sare
March 26, 2021 Shubham Sharma Germany, waxyaabo waxtar leh
Kiniin ahaan, badeecad ahaan, wuxuu ku siin karaa faa'iidooyin badan kan casriga ah. Hubinta baaxadda weyn waxay ka dhigeysaa daawashada fiidiyowyada iyo cayaaraha neecaw. Waxay sidoo kale ku habboon tahay kuwa doonaya inay akhriyaan buugaagta, la sheekaysiga fiidiyowga qaraabadooda, ama xoogaa sameeyaan
Sidee shaqo looga raadiyaa Jarmalka?
December 24, 2020 Antika Kumari Germany
Goobaha Shaqada Jarmalka Dadweynaha Hay'adaha Shaqada ee Federalka, oo ah shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegyada suuqa shaqada ee Jarmalka, waxay leedahay shabakad ka badan 700 hay'adood iyo xafiisyo adduunka oo dhan ah. Si kastaba ha noqotee, Adeegga Meelaynta Caalamiga ah (ZAV) wuxuu bixiyaa macluumaad ku saabsan furitaanka shaqada, oo ay ku jiraan
October 30, 2020 Antika Kumari Germany, fiisada
Jarmalka, oo loo yiqiin Jamhuuriyadda Federaalka Jarmalka. Waxaa si weyn loogu yaqaanaa heerka shaqo la'aanta oo hooseysa iyo shaqo la'aanta o ka jirta dhinacyo badan. Waxaa jira sharciyo badan oo adag oo ay soo rogtay dowladda Jarmalka si loo xakameeyo shaqo la'aanta. Way soo rogeen
Jaamacadaha ugu Fiican Jarmalka
June 18, 2020 Antika Kumari Germany, waxbarasho
Jarmalka ayaa caan ku ah deeqaha waxbarasho iyo khidmadaha waxbarista oo yar. Wadanku waa meesha ugufiican uguna wanaagsan ee aan loohadlin waxbarashada. Ugu horreyntii, haddii aad rabto inaad wax ku barato Jarmalka markaa waa inaad fiirisaa kuwa ugu fiican
March 23, 2020 Maitri Jha Germany, soo qaado, safarka
Nidaamyada gaadiidka loo adeegsado Jarmalka macnaheedu waa trams, U-Bahn, iyo S-Bahn. Haddii aad joogtid Jarmalka markaa waxaad ugu safri kartaa waddanka oo dhan si fudud .Haddii aad joogto Jarmalka markaa waxaad ugu safri kartaa waddanka si fudud. Ku dhowaad magaalo kasta oo Jarmal ah
Waqtiga ugu Fiican ee Aad Booqo Jarmalka
March 22, 2020 Maitri Jha Germany, safarka
Jarmalku waa waddan qurux badan oo ku yaal bartamaha Yurub. Jarmalka wuxuu caan ku yahay kubada cagta iyo 25 kun oo qalcadood. Waxyaalahan oo dhami waxay dalka ka dhigayaan mid aad u qurux badan oo qurux badan. Haddii ay dhacdo inaad qorsheyneyso inaad booqato arrimaha Jarmalka
Qiimaha Nolosha Jarmalka
December 28, 2019 Maitri Jha Germany, lacag
Celcelis ahaan waxaad u baahan doontaa inaad ku qarashgareyso qiyaastii 850 euro bishiiba si aad ugu noolaato Jarmalka waxaanan u maleynayaa in qiimaha nolosha Jarmalka uu aad uga badan yahay kan Hindiya, waxaad ka hubin kartaa numbeo. Laakiin isla markaa, Jarmalku maahan mid aad u badan